Solombavambahoakan’i Madagasikara : Manohana ny vina « Fisandratana 2030 » -
AccueilRaharaham-pirenenaSolombavambahoakan’i Madagasikara : Manohana ny vina « Fisandratana 2030 »
Mazava ny an’ireo depioten’i Madagasikara maro an’isa, miisa 79. Nambaran’ireo solombavambahoaka nisolo tena azy ireo tany Faratsiho, ny zoma 27 avrily teo nandritra ny lanonana fametrahan’ny Filoham-pirenena, Hery Rajaonarimampianina ny vato fototra manamarika ny fanombohana ny asa fanamboarana sy fanarenana ny Lalam-pirenena faha-43 (RN43) fa manohana tsy misy fepetra ny vina « Fisandratana 2030 » izy ireo.
Araka izany, nambaran’ny solombavambahoakan’Antsirabe II, Nirina Ravelohanitra, fa manohana ny asa fampandrosoana ataon’ny Fitondram-panjakana izy ireo, ary manohana ny vina « Fisandratana 2030 » ihany koa. « Izahay solombavambahoaka maro an’isa dia manohana hatrany ny Filoha Hery Rajaonarimampianina sy ny Fisandratana 2030. Manohana ireo tetikasa fampandrosoan’ny Fitondrana ankehitriny. Efa maro tsy tambo isaina ireo zava-bita, indrindra ireo fotodrafitrasa fototra napetraky ny Filohan’ny Repoblika. Mbola maro ihany koa anefa no an-dalam-pahavitana sy hotanterahin’ny Fitondram-panjakana misy ankehitriny. Noho izay indrindra, manohana ny Filoham-pirenena hatrany izahay amin’ny fanatanterahana ny vina “Fisandratana 2030”, hoy ny depiote Nirina Ravelohanitra.
Ankoatra izay, notsindrian’ity solombavambahoaka voafidy tao Antsirabe II ity fa tsy azo ekena velively ny fanaovana barofo sy fangalana fahefana eny an-dalambe amin’ny alalan’ny fanonganam-panjakana. “Mila hajaina sy arahina hatrany ny Lalàm-panorenana. Azo lazaina fa manitsakitsaka ny lalàna velona misy eto amin’ny firenena ireo mpanakorontana amin’izao fotoana izao. Tsy azo ekena ihany koa ny fanaovana sorona ny vahoaka sy ny famotehana ny firenena”, hoy hatrany ity depioten’i Madagasikara avy ao Antsirabe II ity.
Etsy andaniny, mitohy hatrany, hoy izy ireo, ny asa fampandrosoana ny faritra maro manerana an’i Madagasikara ka tsy azo sakana izany. “Tsy misy fampandrosoana mihitsy eto amin’ny firenena raha tsy misy fitoniana. Noho izany, manao antso avo amin’ny vahoaka izahay ho tony, ary hanohitra ny herisetra isan-tsokajiny izay tsy ahafaha-mampandroso ny firenena sy hametrahana ny fitoniana sy ny filaminana”, hoy izy teny am-pamaranana.
Vao nigadona teto Madagasikara i Marc Ravalomanana dia nanao fanambarana fa tsy mahandry izany 2018 izany ny tenany ary tsy maintsy hiverina eo amin’ny fitondrana. Tsy mbola nilaza mihitsy ny tenany tamin’izany fotoana izany fa ...Tohiny